I-AMETRINE INTSINGISELO + YEZIBONELELO ZOKUPHILISA - INANI
I-Ametrine Intsingiselo + yeempawu zokuphilisa
I-Ametrine yikristale edibanisa amandla e-amethyst kunye ne-citrine kunye! Njenge-amethiste, i-citrine ikwaluhlobo lwe-quartz, kwaye ekubeni i-quartz yikristale eyomeleza amandla, ukudityaniswa kweekristali kusebenza ukukhulisa omnye nomnye! I-crystal ibonisa i-hues yegolide eluhlaza okwesibhakabhaka edibeneyo kunye ne-violet kwiitoni ezibomvu. I-Ametrine lilitye elitshintshayo eliququzelela impumelelo, inkqubela phambili yomsebenzi, kunye nokuphilisa kumanqanaba okomoya, engqondo, kunye neemvakalelo, ngelixa bekudibanisa namandla e-Ascended Masters, iingelosi ezinkulu kunye nezikhokelo zomoya.
Amakhesti e-Amethyst kunye ne-citrine zombini ziyinxalenye yosapho lwe-quartz, nangona kunjalo, i-amethyst ithathwa njengelinye lamatye e-Master Healing Stones, kwaye lenze eli gama ngokufanelekileyo kuba lilitye elinokuthi yenza konke. ' Igama ngokwalo livela kwigama lesiGrike amethisto Intsingiselo yokuba unganxilanga okanye awunxilanga, kwaye waziwa njengelitye elinobunkunkqele ukuphuma kwimikhwa okanye imikhwa engasebenziyo. AmaGrike ayekholelwa ukuba banxiba isiqwenga semingxunya yeamethiste ngelixa besela iwayini okanye besela kwikomityi ehonjiswe ngekristale, oko bekuya kuthintela ukuzinkcinkca ngotywala kwaye kubenze bangonwabi. Uthini na ukuba siyivavanye le ithiyori?! Ha ... ndiyadlala… .kodwa hayi nyani… ..
I-Amethyst yaziwa njengelitye lempumelelo kunye nenhlanhla. Yandisa unxibelelwano lwakho lokomoya kunye nemithombo yobuthixo kwaye ivule ingqondo yakho ekuyileni okungapheliyo ngamandla e-Universal Life Force ahamba ngawe, ephakamisa ukungcangcazela kwakho, ke oko kuluncedo ngakumbi kubantu abafuna ikhondo lobugcisa. Ukungcangcazela kweamethiste kucoca iibhlokhi ezinamandla ezivumela izipho zemvakalelo zesithandathu ukuba zityhilwe, ngakumbi ngesiprofeto sokuphupha ngokusebenzisa iisimboli, izikweko, ezikudibanisa namandla eengelosi ezinkulu kunye nezikhokelo zakho zomoya, zikunika amandla okuqonda inyani ngokwembono kaThixo. Imithunzi emnyama yeamethiste isebenza njengesihlangu esikhuselayo kuhlaselo lwengqondo, kwaye isusa ukuphazamiseka kumandla ashukumisayo asezantsi / amaziko. Kuthiwa eli litye liluncedo ngokukodwa ekulungiseni iinyembezi zasemoyeni kunye nokukhupha amandla angangowakho ngaphakathi kweemvakalelo zengqondo, zengqondo nezomoya.
Oku kunokuvakala ngathi kuphindaphindwa kwi-blog yeeveki ezidlulileyo kwi-amethyst, kodwa i-ametrine iluncedo ngakumbi ekucoceni nasekuphiliseni i-Crown chakra, i-Solar Plexus chakra, kunye nokuvula i-chakra yeLiso lesiThathu, indawo yakho ye-6th sens / psychic centre, ukongeza kumalungu kunye namalungu. yomzimba onxulunyaniswa nezo chakras: ukusebenza kwengqondo kunye neempawu zemithambo-luvo ngengqondo, ukonyuka kojoliso, ubukrelekrele, kunye nenkumbulo, ukukhuthaza ipineal gland, ukukhulula iimpawu zokungalali, iiwadi zokuphupha amaphupha amabi, iingcinga ezimbi, ukuphilisa abo balwa nomsindo kunye iingxaki zokuziphatha ezinje ngeziyobisi, (utywala, iziyobisi, ukutya kakhulu, ukutshaya, ubudlelwane obunetyhefu), ukuphazamiseka okungafunekiyo (OCD), hyperactivity (ADHD) - ngakumbi ebantwaneni. I-Ametrine ikwanceda kwinkqubo yomzimba yokuzikhusela, ukulinganisa kunye nokuvumelanisa amalungu: izintso, isibindi, udakada, injeke kunye nenyongo. Imizamo edibeneyo ye-amethyst kunye ne-citrine ikuvumela ukuba ugcine ingqondo yakho icacile, kwaye uqaphele amandla eengcinga zakho kunye neenjongo-zokukubeka ngengqondo elungileyo. Icandelo le-amethiste kwi-ametrine lizisa ukomelela kunye namandla kwabo basebenza nelitye, ngakumbi xa besentlungwini, bexhalabile, bekwimo yokothuka, okanye xa ubomi bubonakala bunzima.
Icandelo le-citrine kwi-ametrine lilungile ngokukodwa ekucoceni i-Solar Plexus, kunye namalungu ahambelana nale chakra, kubandakanya izintso, isinyi, idlala lengqula, i-thymus, ukongeza ekuncedeni ukwetyisa, ukuqhina, ukujikeleza kwegazi I-Solar Plexus chakra ebekwe ngentla apha. inkaba yakho kunye nasembindini wesisu sakho. Kuthiwa ukusebenza ngale kristale kukunceda ukuba uze nezisombululo kuyilo kwiingxaki, ukuhambisa ukungakhathali, unxunguphalo kunye neemvakalelo ezinetyhefu, ukonyusa isibindi, ukuzithemba, kunye nokwenza intando yakho, amandla akho okuseta imida esempilweni kubudlelwane, hlukana nomda imikhwa okanye iinkolelo zokufezekisa konke ozimisele ukukuphumeza. Amandla azisa i-citrine kwitafile ayalinganisa, kunye nokuzinzisa amandla akho. Kuba i-Solar Plexus chakra ithathwa njengeziko lakho lamandla, iyanceda ekutshisweni kunye nokugcina amandla alinganayo. Eli litye kuthiwa liyanceda kwinkqubo yemithambo-luvo ezenzekelayo, ukuzinzisa iDNA / RNA, ukuzisa ioksijini emzimbeni, ukunceda ekunyangeni isifo esinganyangekiyo (FFS), kunye nezinye izifo ezinxulumene noxinzelelo.
Unokukhetha ukuphatha le kristale njengelitye ekrwada epokothweni yakho, isipaji, usibeke phantsi komqamelo ebusuku, okanye uyinxibe njengezacholo. Kuba i-ametrine lilitye elinamandla lokuphelisa uxinzelelo, unokukhetha ukubeka enye emotweni yakho, apho usebenza khona, okanye nakweyiphi na indawo ongathanda ukuzisa kuyo amandla oxolo.
Njengelitye eliphezulu lokungcangcazela, lithwala ukungcangcazela kweeMasters eziNyukayo kunye neeNgelosi ezikhulu kunye nezikhokelo zomoya. Ingelosi enkulu enxulunyaniswa nokushukuma kwe-ametrine ibandakanya i-Archangel Jophiel, ogama lakhe lithetha Ubuhle bukaThixo, le ngelosi enkulu ithumela iintsikelelo zobuhle nobulumko.
Ingelosi enkulu edibene ne-Amethyst kunye neCitrine yi-Archangel uGabriyeli, uThixo ungamandla am, umthunywa woMthombo. Le ngelosi iyaziwa ukuba ibasikelele abo ngesipho sokuphefumlelwa okuNgcwele, ukukhokela kunye nokutolika.
Iingelosi zengelosi ezinxulumene ne-Amethyst zibandakanya: I-Archangel Metatron, ogama lakhe lithetha ukuba Lowo usebenza emva kweTrone, ingelosi yokunyuka, ukukhanyiselwa, ukuvela komphefumlo, nokulawula iiRekhodi ze-Akashic. Ingelosi eyintloko uRaziel, ogama lakhe lithetha Imfihlelo kaThixo, umgcini weemfihlakalo kunye neemfihlakalo zeNdalo iphela, uncedisa ekuphuhliseni isiprofeto kunye nezipho zobuqaqawuli. Ingelosi enkulu u-Tzaphkiel, (naye upela u-Zaphkiel) ogama lakhe lithetha uLwazi ngoThixo, kunye nesithunywa sokuqonda, ukuqonda, imfesane. Ingelosi eyintloko uZadkiel, ogama lakhe lithetha ubulungisa bukaThixo, kunye nengelosi yoxolelo, inkululeko, inceba, kunye neVolet Flame. Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, iNgelosi eyintloko uJeremiel, ogama lakhe lithetha iNceba kaThixo kunye nengelosi yokwenza utshintsho oluqinisekileyo, ukucaca kwengqondo, kusinceda ukuba sazi iingcinga zethu kunye neemvakalelo zethu, sincedise kuphononongo lobomi, imibono yesiprofeto, ubuqaqawuli.
Ukuba usebenzisa le kristale kwisicelo seFeng Shui, ithwala izinto zomoya.
I-Amethyst inxulunyaniswa neempawu zodiacac i-Aquarius kunye neGemini.
iliso elihle lehla ngamehlo abomvu
ukubona inani lama-333
Ithetha ukuthini xa uqhubeka ubona i-111
I-111 111 intsingiselo
ingelosi 1010 intsingiselo